मनोरञ्जन Archives - Page3of 10 - Vishwa News
११ देशका ३५० अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारको कुम्भ मेला सम्पन्न
काठमाडौं- एभरेष्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपको अगुवाइमा भएको दशौं संस्करणको अन्तर्राष्ट्रिय लोक साँस्कृतिक मेलाको समापन भएको छ । ‘पर्यटक कलाकारको स्वागत सत्कार, नेपाली लोक संस्कृतिको आधार’ भन्ने मुल नाराका साथ उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको प्रमुख आतिथ्यमा राजधानीमा एक भव्य कार्यक्रमबीच १७ फागुनमा
२९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार विस्तृतमा »
होली शान्तिपूर्ण, ७ सय चालक कारवाहीमा
काठमाडौं । कुनै न कुनै अप्रिय घटना भइरहने होलीको दिन यस वर्ष भने तुलनात्मक रुपमा शान्त रह्यो । सरकारले यो वर्ष समूहमा जम्मा भएर होली नखेल्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको थियो । सर्वसाधारणले समेत सरकारको उक्त आग्रह मानेका छन् । सडकमा
२६ फाल्गुन २०७६, सोमबार विस्तृतमा »
आज पहाडमा होली, सतर्क रहन सरकारको आह्वान
काठमाडौं । आज पहाड र हिमाली भेगमा होली पर्व मनाइदैछ । रंग र अबिरको पर्वका रुपमा लिइने यो दिन आफन्त तथा साथिभाईबीच भाइचारा साटासाट गरिन्छ । फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन यो चाड पर्छ । केही वर्ष अगाडीसम्म निकै उच्छृंखल बनेको
पशुपतिमा झाडु लगाउँदा भाइरल बने पारस
काठमाडौं । पूर्वयुवराज पारस शाह शनिबार पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा देखिए । पारसको राजशी रवाफ समाप्त भइसकेको धेरै भइसक्यो, तर उनी आफ्नो स्टाटसलाई मेन्टेन गर्न नसकेका कारण आम नागरिकका नजरमा भने आलोचित पात्र हुन् । शनिबार भने उनी अलि भिन्न रुपमा
२५ फाल्गुन २०७६, आईतवार विस्तृतमा »
अब भेडेटारमा समेत जीपलाइनको मज्जा
धरान । अब धरानमा समेत जीपलाइन चढ्न पाइने भएको छ । शनिबार धरान ४ स्थित भेडेटारमा साहसिक खेल जीपलाइनको औपचारिक शुभारम्भ भएको छ । भेडेटार देवीथान जीपलाइनको शनिबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गरे । मुख्यमन्त्रीले उद्घाटन गरेको
के नेपालमा मिस वर्ल्ड आयोजना सम्भव छ ?
काठमाडौं । विश्व सुन्दरी टोनी एन सिंह अहिले नेपाल भ्रमणमा छिन् । उनी बिहीबार काठमाडौं आइपुगेकी छन् । मिस नेपाल आयोजक हिड्न टेजर र पर्यटन मन्त्रालयले उनलाई नेपाल आउने चाजोपाँजो मिलाएको हो । मिस वर्ल्ड–२०१९ कि विजेता टोनी पहिलो पटक
२३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार विस्तृतमा »
भ्रमण वर्षका कार्यक्रमबारे अझै अन्यौल
काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनको काम रोकेको छ । विदेशमा हुने सबै प्रकारका यस्ता कार्यक्रम रोकिएका हुन् । तर, नेपाल भ्रमण वर्षलाई भने के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अझै अन्यौल कायम छ । यही संकेत सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा.
२२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार विस्तृतमा »
यो वर्ष सार्वजनिक स्थलमा होली खेल्न प्रतिवन्ध
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक स्थानमा होली खेल्न नदिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले फागु पूर्णिमा (होली)का अवसरमा कार्यक्रम तथा भीडभाड नगर्न आग्रह गरेको हो । कोरोनाभाइरसको संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गर्दै होलीका अवसरमा कार्यक्रम गर्ने वा भीड हुने कार्य गर्न
फागुपर्व एक : प्रभाव अनेक
भीमनारायण श्रेष्ठ / शोणितपुर (थानकोट) विशेषतः हिन्दू धर्मावलम्वीहरू एकआपसमा उत्सुकताका साथ हर्षोल्लासमय वातावरणमा आ–आफ्नै घर आँगन एवम् सहर बजारमाविभिन्न रङ्गहरू खास गरी अबीर (सिन्दूर) एकआपसमा हालाहाल गरी फागुपर्व (होली) मनाउने गर्दछन् । कोहीकोही त पानी छ्यापाछ्याप समेत गरेर फागु (होली)
२१ फाल्गुन २०७६, बुधबार विस्तृतमा »
भ्रमण वर्ष प्रभावित, विदेशमा हुने प्रवर्धन रोकियो
काठमाडौं । संसारभर महामारीका रुपमा फैलदो रुपमा रहेको कोरोनाले नेपालको भ्रमण वर्षलाई भने नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ । विश्वभरका पर्यटक भित्राएर वार्षिक २० लाख पर्यटकलाई नेपालमा स्वागत गर्ने अभियान कोरोनाका कारण प्रभावित भएको हो । सरकारले अब विदेशमा नेपाल भ्रमण
१८ फाल्गुन २०७६, आईतवार विस्तृतमा »
चर्किएको राजनीतिक तनाव छल्न प्रचण्ड सुकुटेमा
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अहिले राजनीतिक द्धन्द्ध उत्कर्षमा छ । गुटगत विवाद उचालिएको छ । खासगरी राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतम वा युवराज खतिवडा कसलाई लैजाने भन्ने विषयमा विवाद चलिरहेको छ । यसै मेसोमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
१७ फाल्गुन २०७६, शनिबार विस्तृतमा »
आलोचित बन्यो प्रधानमन्त्रीको वर्थडे केक
काठमाडौं । रोगले थलिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ६९ औं जन्मोत्सव जन्मस्थान तेह्रथुमको आठराईमा मनाउने इच्छा देखाए । सोहीअनुसार व्यवस्थापनमा जुट्यो स्थानीय सरकार । हजारौं विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रम बाड्ने, वृद्धवृद्धालाई न्यानो लुगा बाड्ने र केक काट्ने रवाफिलो शैलीसहित हेलिकोप्टरमा प्रधानमन्त्री
१२ फाल्गुन २०७६, सोमबार विस्तृतमा »
काठमाडौं । प्रहरी बर्दीमा टिकटक भिडिओ भाइरल भएपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले सई रत्नबहादुर थापामाथि कारबाही थालेको छ । उनीमाथि विभागीय कारवाहीको तयारी भएको कार्यालयले जनाएको छ । भक्तपुरस्थित सुँडाल प्रहरी कार्यालयका इञ्चार्ज रहेका उनको स्थानमा कार्यालयले सई राजु प्रसाईंलाई
११ फाल्गुन २०७६, आईतवार विस्तृतमा »
काठमाडौं । पशपति क्षेत्र विकास कोषले शुक्रबार महाशिवरात्रीको रौनकलाई खास बनाउन पशुपतिमा कुनै कसुर बाँकि राखेको थिएन । करीव २ करोड मूल्य खर्च गरेर भारतबाट ल्याइएको विशेष फूले पशुपति क्षेत्र झकिझकाउ भएको थियो । पशुपति पुग्ने सबैले यसको प्रशंसा समेत
१० फाल्गुन २०७६, शनिबार विस्तृतमा »
आज महाशिवरात्री, शिवको पूजा आरधना गरिदै
काठमाडौं । आज महाशिवरात्री पर्व । हिन्दूधर्मालम्बीका लागि आराध्यदेव भगवान शिवको पूजाआराधना गर्ने विशेष दिनका रुपमा देशभर धुमधामका साथ मनाइदैछ । आज नेपाल र भारतका शिव मन्दिरमा दर्शनार्थीको ठूलो भीड लाग्छ । पशुपतिनाथ मन्दिरमा १० लाख भन्दा बढी भक्तजन यस
९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार विस्तृतमा »